အိုးဝေ: တချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ
Anonymous August 29, 2008 at 4:24 PM
အပေါ်က ပုံလေးရဲ့ လက်ရာရှင်က ဘယ်သူများပါလိမ့် ...
Taungoo August 29, 2008 at 4:57 PM
အကိုဇနိကိုပဲ တွြေ့ပီး အမကို မတွေ့တာကြာလို့ နေများမကောင်းဘူးလားလို့ပါ။
အမတို့ MIT ထဲတော့ တစ်ခါရောက်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ကျောင်းက အထက်ဖက်ကို ခရီးထွက်ကြရင်း ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး ဦးအောင်ကျော်မြတ်ဆီ ဝင်လည်ကြတာ။ ဆရာကြီးက ကျောင်းထဲအနှံ့ လိုက်ပြတယ်။ Theatre ထဲမှာ အအေးလဲ တိုက်သေးတယ်။ ကျောင်းအကြောင်းတွေ ဆက်ရေးပါဗျာ။ အမတို့စီနီယာတွေက အဆောင်ပီပီသသမှာ နေခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကိုဇနိနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေလဲ ရေးပါဦး။ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ကြည်ကြည်နူးနူးပြန်ပြောဖြစ်ကြတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးရေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မြှောက်ပေးတား)
မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ်ဘ၀ကို မနေခဲ့ရဖူးတော့ မဇနိရေးမှပဲ ဘေးကခံစားကြည့်နိုင်တယ် ။ ပျော်စရာကြီးနော် ။
Republic August 29, 2008 at 6:26 PM
စာရေးကောင်းတဲ့ မမနိ .. ပို့စ်ဖတ်ပြီး အတိတ်တွေဆီ ရောက်ကုန်တယ် ၊၊ အဆောင်မှာ မနေခဲ့ ရလို့လားတော့မသိဘူး မမနိ တို့လောက် ကြည်နူးစရာ အမှတ်တရတွေ မများခဲ့ရဘူး ၊၊တစ်ခါတစ်ခါ ကျောင်းဆောင်တွေဆီ ညဘက်ပတ်ပြီး လည်ပါတယ်၊၊ နေ့ဖက်အတန်းချိန် ဆို အိမ်မှာအိပ် ၊ညနေ ကျူရှင်တက် ၊ အားရင် သမားတော်များ စည်း
ဝေး..ထုံးစံအတိုင်း သောက်ကြတာပေါ့ ၊၊ :Pအပေါင်းအသင်း နည်းတာလည်းပါမယ်ထင်တယ် ၊၊ မမနိတို့က ပိုပြီးပျော်ရွှင် ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ် ၊၊စုစုဝေးဝေး အမှတ်တရ တွေနဲ့ပေါ့ ၊၊
little moon August 29, 2008 at 7:04 PM
ပင်းယဆောင်နေ့ရက်တွေ RC2ထဲဝင်းထဲက ICST ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တာတွေ ညဖက် အင်ကြင်းဆောင်ရှေ့ သီချင်းဆိုခဲ့တာတွေ အင်းယားကန်ဘောင်မှာ မိုးလင်းပေါက်ထိုင်ပြီး ဂီတာတီးကြ စကားပြောကြတာတွေ ... အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာ ..... ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး အရမ်းကို လွမ်းသွားပြီ။
tmn August 29, 2008 at 8:03 PM
မနိရေးလိုက်မှ ကျောင်းသားဘ၀ကို လွမ်းသလို ဆွေးသလိုပဲ... အဲဒီအချိန်တွေကိုတော့ ပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူး...PT လုပ်ရမှာ ကြောက်လို့...:D
Moe Cho Thinn August 29, 2008 at 10:24 PM
မဇနိက စာရေး အရမ်းကောင်းပဲနော်။ ကျောင်းသားဘ၀ကို အသက်ဝင်အောင် ရေးပြတာ တကယ်ပဲ လွမ်းသွားပြီ။
khin oo may August 29, 2008 at 11:04 PM
မောင်ဖြူ August 30, 2008 at 1:08 AM
ဒီချိန်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အလယ်ထဲမှာ ပိတောက်ပန်းတွေလဲပွင့်နေပြီကွာ။ ပိတောက်နံ့သင်းတဲ့ လေညင်းတွေကိုသတိရတယ်။ မြူတွေဆိုင်းတဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေကိုလွမ်းတယ်။ ဆူညံညံစကားဝိုင်းတွေနဲ့ ဂိတ်ပေါက်ကအကြော်ဆိုင်ရယ်....
လယ်ကွင်းလေးတွေဘေးနားက စက်ဘီးလမ်းလေးရယ်၊ ရေမြောင်းဘေးက ကျောက်ခင်းလမ်းလေးရယ်...
Anonymous August 30, 2008 at 7:26 AM
အစ်မရေ့...အပေါ်ဆုံးအပိုဒ်မှာရေးထားတည်းက စိတ်ဝင်စားစရာလေး ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာကတော့ ပြန်စဉ်းစားတိုင်း ဟောင်းမသွားတဲ့ တွေးလိုက်တိုင်းလတ်ဆတ်နေသေးတဲ့ ဘ၀အမှတ်တရတွေပဲ အစ်မတို့ ကျောင်းသူဘ၀ကတော့ ပျော်ဖို့ ကောင်းမှာပေါ့ အခုခေတ်ကမတူတော့ဘူးလေး) ထောင်ထဲဝင်နေရသလိုပဲ ကျောင်းတက်ချိန်ပြီးရင်ကျောင်းတံခါးသော့ခတ်
ကျောင်းခေါ်ချိန်စာရင်းကို အချိန်တိုင်းစစ် စာအုပ်မူရင်းမရလို့ကော်ပီကူး ပိုက်ပိုက်လေးကပြောင် ထမင်းစရိတ်ကဈေးကြီး ရေ၀င်မီးပျက် အကောင်းစား အဆောင်လခက တစ်လတစ်သောင်း ကော်ဖီတစ်ခွက် ၃၀၀ ဆိုတော့ ကုန်ပြီပေါ့ဂျာ အဲ့အမှတ်တရတွေကိုတော့ ပြန်စဉ်းစားတိုင်း စိတ်ရှုပ်တယ် ဟီးး အခုတော့လည်း ၀ဋ်ကျွတ်သွားပါပြီးး :)
တန်ခူး August 30, 2008 at 8:25 PM
မဇနိရေ… လွမ်းလို့ မ၀တဲ့ ရွှေရောင်နေ့ ရက်တွေကို ပြန်ရောက်သွားတယ်… မဇနိက အရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဆွဲခေါ်တော့ ဒီမှာ လွမ်းကုန်ပြီ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ… MITကလဲ ပျော်စရာကြီးနော်… ထမင်းနဲပွဲလေးကို မျက်စိထဲတောင် မြင်အောင် ရေးတတ်ပါဘိ… ပါးကွက်ကြားနဲ့ အညာသူလေးတွေက ချစ်စရာနော်… တို့ ကျောင်းမှာတုန်းက အဆောင်သူမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်က အညာသူဆိုတော့ အဆောင်က အညာသူလေးတွေ သွားသွားခင်တာ… အညာလေသံလေးတွေချစ်လွန်းလို့ … ကိုဇနိနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အဲဒီလို ခပ်ပါးပါးလေး မလုပ်ပါနဲ့ … ဖတ်ရတာ အားမရဘူး… ကျောင်းနောက်ခံ အချစ်ဇာတ်လမ်း အသေးစိတ်လေး မျှော်နေမယ်နော်….
အကြောင်းသိ August 31, 2008 at 4:09 AM
မူးလို့သွားသွား အော်နေတာ သူယို့ က တကယ်ထင်နေတာကိုး။
အော် နှောင်းခဲ့ပြီလေ :)